Rehefa manomboka manala ny tenany ny kittens | Noti saka
Rehefa manomboka manamaivana ny saka ny kittens
Maria Jose Roldan | | Fiompiana saka, curiosities
Rehefa mihaona a kamboty kamboty Rehefa afaka andro na herinandro vitsivitsy amin'ny fiainana dia mila omena fikarakarana maromaro ianao satria fantatrao fa, raha tsy izany, tsy hanana vintana hivelomana izany. Araka izany, rehefa mandeha ny fotoana ary maniry ny volony, manomboka manantena ny andro lehibe ianao: ny andro ianarany amin'ny farany hanamaivana ny tenany samirery.
Fa maninona Satria rehefa mitranga izany dia tsy hiankina aminao intsony ny lavalava, satria hianatra hihinana amin'ny lovia misy azy tsy misy olana. Ankehitriny, noho izany dia mila miandry herinandro vitsivitsy isika. Mandritra izany fotoana izany, andao hojerentsika rahoviana ny kittens no manomboka manamaivana ny tenany?.
1 Manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 1 volana eo amin'ny fiainana
1.1 Impiry impiry ny saka no mivoaka ny zaza?
1.2 Ahoana ny fomba fanaovana kibo vao teraka?
1.2.1 Tahaka ny inona ny fivalan'ny saka?
1.3 Afaka andro firy ny saka saka nefa tsy mandoto?
2 Manomboka amin'ny volana fiainana
2.1 Rahoviana ny saka no manomboka mihinana?
2.2 Rahoviana ny saka no manomboka manamaivana ny tenany?
2.3 Ahoana ny fomba hampianarana saka saka hampiasa ny boaty fako?
2.4 Maharitra hafiriana vao mianatra hampiasa ny boatina fako ny zanak'ondry?
3 Inona no hatao raha tsy afaka mandeha maloto ny saka
4 Fa maninona ny saka iray no mety ho lasa mikatso?
4.1 Inona avy ireo soritr'aretina?
5 Sorohy ny fitohanana ao amin'ny sakao
Manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 1 volana eo amin'ny fiainana
Impiry impiry ny saka no mivoaka ny zaza?
Kittens hatramin'ny 1 volana dia tokony hanome sakafo ronono ho an'ny kittens amidy amina fivarotana biby na toeram-pitsaboana biby, na misy tsindrona tsy mila ilana azy na, tsara kokoa, a tavoahangy famahanana manokana ho an'ny biby, isaky ny 3 na 4 ora (afa-tsy amin'ny alina, izay tsy ilaina intsony ny manaitra azy ireo raha salama izy ireo).
Isaky ny sakafo tsirairay dia tsy maintsy amporisihina izy ireo hanala tena, raha tsy izany dia hitranga ny olana. Tandremo anefa raha tsy miresaka afa-tsy ny fahalasan-drà isika dia tsy maintsy fantarintsika fa ny fanaovana indray mandeha / andro dia ho mihoatra ny ampy.
Ahoana ny fomba fanaovana kibo vao teraka?
Ao anatin'ny 10 minitra aorian'ny fisakafoanana, ny hataontsika dia omeo fanorana boribory izy amin'ny fanondrony. Manomboka eo ambanin'ny taolan-tehezana izahay ary miasa midina tsikelikely. Ny hetsika dia tokony ho malama, tsy mila fanerena saika. Ka mila mijanona mandritra ny roa minitra isika.
Avy eo, maka taratasy landihazo na fidiovana isika, mandena azy amin'ny rano mafana (38ºC eo ho eo) ary manosotra azy amin'ny lafiny roa amin'ny lozisialy mandritra ny fotoana kelikely (ara-dalàna, aorian'ny 20-30 segondra dia matetika ny olona be volo no mamoaka ny diky).
Tahaka ny inona ny fivalan'ny saka?
Raha mbola salama aho mavo ny lokony. Ho fanampin'izay, manana endrika malina izy ireo. Raha sendra maintso na mena na mainty izy ireo dia tsy maintsy entinao any amin'ny mpitsabo vetivety araka izay tratra izy.
Afaka andro firy ny saka saka nefa tsy mandoto?
Tsy haiko ny milaza aminao ny isa marina, nanomboka miankina betsaka amin'ny fahasalamanao izany. Raha salama ianao dia afaka hahatratra telo andro, saingy tsy salama. Ny tsara indrindra dia tokony hanamaivana ny tenanao isan'andro ianao.
Manomboka amin'ny volana fiainana
Rahoviana ny saka no manomboka mihinana?
Vantany vao nahavita ny volana izy ireo, tsy mila omena tavoahangy / syringe intsony izy ireo, fa manao tsy maintsy manomboka manome sakafo malefaka ho azy ianao, Inona sakafo lena ho an'ny kittens, misy ronono na rano isaky ny 4 na 5 ora.
Amin'izay fotoana izay dia tsy ilaina intsony ny manohy manampy azy ireo amin'ny fahalavoana, fa raha hitantsika fa sarotra ho azy ireo izany dia tsy maintsy manohy isika.
Rahoviana ny saka no manomboka manamaivana ny tenany?
Miankina betsaka amin'ny fotoana hanombohanao manome azy ireo sakafo matanjaka. Azoko atao ny milaza aminao fa ny saka saka Sasha dia nanomboka nanala ny tenany iray andro na andro vitsivitsy taorian'ny nanomezako azy canina voalohany, fa samy hafa kosa ny samy hafa. Mety haharitra kokoa ny anao, na latsaka.
Ahoana ny fomba hampianarana saka saka hampiasa ny boaty fako?
Tsotra be izy io. fotsiny tsy maintsy apetrakao ny fantsakany (raha tsy manana ianao azonao atao ny mividy azy eto) eo akaikin'ny feeder azy ireo, ary apetraho ao anaty 10-15 minitra aorian'ny fisakafoanana. Raha vantany vao manao ny orinasany izy dia omeo fitsaboana (mitsabo, manafosafo).
Mety ho sarotra amin'ny voalohany, saingy amin'ny fahatsapana voajanahary dia ho hainao haingana ny manamaivana ny tenanao eo amin'ny lovia. Mazava ho azy, rehefa feno roa volana izy dia tazomy hisaraka amin'ny sakafo ny boatin-taniny. Ny saka dia tsy tia mihinana akaikin'ny toerana hanamaivanana ny tenany, na ny mifamadika amin'izany: manao ny zavatra amin'ny sakafo akaiky.
Maharitra hafiriana vao mianatra hampiasa ny boatina fako ny zanak'ondry?
Ny marina dia izao, depende. Misy ny zana-kazo mianatra faingana ny mitsentsitra sy ny mivoaka ao anaty fako, fa misy kosa ireo izay manana fotoana sarotra kokoa. Tsy misy taona ho an'io, fa azoko lazaina aminao fa, rehefa manomboka mihinana sakafo matanjaka ianao, dia manomboka mifehy tena ny rafi-pandevonan-kanina. ary miaraka amin'izany, koa ny filan'izy ireo hikarakara ny fahadiovany.
Aza manahy. Ho avy ny andro lehibe. Ny ankamaroan'ny saka 6-herinandro dia efa nianatra nanao ny azy manokana., noho izany dia mila manana faharetana kely fotsiny ianao ary manome azy ireo fanalefahana.
Inona no hatao raha tsy afaka mandeha maloto ny saka
Raha tsy afaka mandeha maloto ny saka dia mety hikorontana, amin'ity tranga ity, zava-dehibe ny handinihanao lafin-javatra sasany. Ny fitohanana amin'ny saka dia mahazatra, izany no antony tsy maintsy ahitanao ny soritr'aretina, ny antony ary amboary.
Raha mihinana sy misotro rano isan-andro ny sakao dia mahazatra azy ny manondraka tsara, fa raha tsy nandoaka rano nandritra ny roa na roa andro izy na henjana be na maina be ilay seza dia mety ho fitohanana izany. Raha tsy mandeha tsiranoka izy dia tsy maintsy entinao any amin'ny mpitsabo biby mba hanombanana ny fahasalamany.
Rehefa voafintina ny saka dia miakatra ao anaty tsanganana ny fivalanana ary lasa mafy, ka manasarotra ny handehanany moramora avy ao amin'ny vala. Raha maharitra ny fitohanana, dia mety hisy ny sakana amin'ny tsinay na olana ara-pahasalamana hafa, noho izany Zava-dehibe ny hijerenao ny fotoana andehanany mankamin'ny fako ary raha manao seza izy na tsia.
Fa maninona ny saka iray no mety ho lasa mikatso?
Ny antony mahazatra mahatonga ny fitohanana amin'ny kittens dia mety:
Tsy ampy rano na mihinana rano ambany
Sakafo ambany fibre
Nihinana zavatra hafahafa, toy ny zavatra iray
Olana amin'ny voina
Ny famantarana voalohany dia mora jerena: tsy misy fananahana. Fa ankoatr'izay, misy soritr'aretina hafa tokony ho tadidinao:
Miezaka ny manary tena ianao fa tsy afaka
Mandany fotoana be dia be ao amin'ny boaty fasika
Miova na mitomany isaky ny ao anaty boaty fasika
Ny seza vitsivitsy ataonao dia misy rà na moka
Tsy noana izy
Mampiseho fihetsika tsy miraika
Sorohy ny fitohanana ao amin'ny sakao
Zava-dehibe izany ampio izy hisorohana ny fitohanana ka tsy mila mandalo azy ianao. Mba hanaovana izany, raha hitanao fa misotro rano kely izy dia ametraho ao an-trano ny lovia rano na amporisiho izy hisotro rano avy amin'ny paompy raha toa ka mety ho fanjifana.
Azonao atao koa ny mampifangaro sakafo maina amin'ny saka saka mando. Na dia ilaina aza ny tadidinao fa tsy ny sakafo saka saka rehetra no tokony ho lena satria mety handoto ny nifiny izany. Raha toa ka miteraka fitohanana ny sakao, dia tsara kokoa ny miresaka amin'ny mpitsabo biby ary manaiky ny sakafo ho azy mba hahafahany manondraka tsara nefa tsy misy olana. Hay saka saka misy fibre izany dia hanampy anao hahatratra azy.
Ny boaty fasika dia tokony ho amin'ny toerana mangina sy madio foana. Raha mandoa volom-bolo matetika ny saka dia omeo vola kely Malta indray mandeha isan-kerinandro. ihany koa borosio ny volony hampihena ny volo maty latsaka.
Araka ny hitanao dia misy paikady marobe azonao ampiasaina mba tsy hijaly noho ny fitohanana ny saka, na firy taona izy na firy. Zava-dehibe ny hahafantaranao rehefa manana fihetsiketsehana tsinay ianao ary manao ahoana ny fivalananao, fa koa inona no hatao raha mivadika ho kamboty ianao!
Manantena fa mety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Rehefa manomboka manamaivana ny saka ny kittens
Miguel Mladonado dia hoy izy:
Nahita kittens roa aho. Zaza izy ireo. Fahanako izy ireo ary ataoko mimi. Saingy tsy mandoto izy ireo. 3 andro izay no nahitako azy ireo ary tsy mivoaka ny otrikaretina izy ireo fa mony fotsiny. Izay azoko atao. MISAOTRA
Valiny tamin'i Miguel Mladonado
Azonao atao ny manondraka gauze madio miaraka amin'ny vinaingitra ary manentana ny faritra maha-lahy sy ny vavy ao anatin'ny 15 minitra taorian'ny nisakafoanao.
Safidy iray hafa ny manisy vinaingitra eran'ny vinaingitra ao anaty tavoahangy, nefa indray mitete fotsiny, tsy misy intsony.
Azonao atao ihany koa ny manotra ny kibony, 5 minitra aorian'ny fisakafoanana. Manaova fihetsiketsehana malefaka sy boribory, kitiho kely fotsiny. Atombohy eo an-tampony ary hiasa ambany.
Ary raha mbola tsy manala rano izy ireo dia tokony ho hitan'ny mpitsabo biby satria mety mila catheter izy ireo.
Eddy Rodriguez dia hoy izy:
Salama, salama maraina, manana saka 8 volana aho, niaraka tamin'ny saka izy ary voan'ny aretina ny taolany ary nentinay tany amin'ny mpitsabo biby izy ary nositraniny nefa izao izy irery no mandevona ary mikiakiaka tsy tsapany. rehefa manao izy dia afaka manao izany ?.
Valiny tamin'i Eddy Rodríguez
Ny tsara indrindra dia ny hamerenanao azy io any amin'ny mpitsabo biby mba hijerena azy io indray.
Tsy mpitsabo biby aho.
Iray volana ny zanako vavy ary sady tsy nikiaka no tsy natokana, tena manahy aho, inona no azoko atao?
Mbola misotro rononon-dreniny ihany izy ireo, io ihany no haniny.
Mety mila fanampiana amin'izany izy ireo. Makà gazoala na taratasy fidiovana madio, hosorana rano mafana, aforeto ary hamafa ny faritra misy ny taovam-pananahana. Mba hanampiana azy ireo bebe kokoa dia azonao atao ny manome azy ireo fanorana boribory (amin'ny lafiny iray amin'ny famantaranandro) ao anatin'ny dimy minitra aorian'ny fisakafoanana, ary avy eo manaitaitra azy ireo.
Azonao atao ihany koa ny mandena ny faritra misy vinaingitra kely.
Etsy an-danin'izany, amin'io taona io ianao dia afaka manomboka manome sakafo lena ho an'ny kittens (kapoaka), voatetika tsara.
Salama, ho anao sy ho an'izay rehetra manana an'io fanontaniana io, antenaiko fa hanompo anao ny valinteniko, nanana zanak'ondry aho nandritra ny androm-piainako, ary azoko lazaina aminao avy amin'ny zavatra niainako fa raha miaraka amin'ny reniny izy ireo, dia izy tenany ihany no mandrisika azy ireo ary manadio ny dikin-droniny sy ny rihiny, tsia Tokony hatahotra ianao, tsy hahita soritry na inona na inona mihitsy ianao, hitsahatra tsy hanao an'izany ireo reny raha vao mianatra samirery hanamaivana ny tenany ao anaty fasika.
Blanca Espinoza dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny torohevitrao. Manana zanak'akanjo kamboty izay nesorina na dia tamin'ny tadim-poitra aza aho. Nanomboka tamin'io andro io dia nikarakara azy aho ary 5 herinandro lasa izay ary tena maditra izy. miala sasatra eo ambanin'ny seza misy tànana izy. Izahay efa nividy anao izay rehetra ilainao amin'ny zavatra rehetra. Tena tiako izy ary mikarakara ahy moramora amin'ny tanany kely izy.
Valiny tamin'i Blanca E Espinoza
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, Blanca 🙂
Salama, omaly nahita zanak'ondry roa teny an-dalambe aho, zaza vao teraka dia ho roa andro, nesoriko izy ireo, nomeko ronono vita amin'ny hoditra vita amin'ny rano izy ireo, mikiaka tsara izy ireo fa tsy mandoto, inona no azo atao?
Manotra ny vavony amin'ny fihetsika boribory famantaranandro mandritra ny minitra vitsy (3-4).
Raha tsy mandeha izy dia mando amin'ny fofona menaka ny faran'ny swab avy amin'ny sofina ary kosohy amin'ny faritra misy ny taovam-pananahana.
Ary raha tsy mandeha koa izany dia amporisihiko ianao hitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo biby.
Giss dia hoy izy:
Salama, manan-janaka vavy 15 andro hitako aho, kamboty, mitaiza azy aho ary manao ny asany izy ary mety daholo ny zavatra rehetra rehefa entanentana izy, mafana izy ary manana izay ilainy rehetra; fa amin'ny intermissions izay itoriany (2-3 ora) dia mikiaka amin'ny fandriana kely fatoriany izy, satria nosokafany ny masony dia nataony izany; Ara-dalàna izany ?? Rahampitso fotsiny dia efa nifanao fotoana tamin'ny mpitsabo biby izy.
Mamaly an'i Giss
Mety ho ara-dalàna izany, eny. Ny zaza kittens dia tsy mifehy ny fivalanany.
Na izany na tsy izany, jereo izay lazain'ny mpitsabo anao.
Salama tsara, manana fanontaniana aho fa misy saka iray eo amin'ny 1 taona eo ho eo
nanana zazakely 2 izy, saingy tsy mino ny zanany fa manao izay ilainy, ny iray tamin'izy ireo ihany no hitako nibontsina satria nanao izany teo ambonin'ny farafarako, saingy mbola tsy hitako mihintsy izy ireo.
Teraka tamin'ny 5 Febroary izy ireo ary 1 volana izy ireo ary mbola tsy hitako ny manamaivana ny tenany ary tsy mivoaka ny efitranoko izy ireo
Ara-dalàna ve ny tsy fofona ny zavatra ilain'izy ireo sa tsia?
Tsia, tsy mahazatra izany.
Ny saka salama dia tokony hihiaka in-3 isan'andro eo ho eo, ary hanary farafaharatsiny 1. Manoro hevitra aho ny hitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo biby mba hijerena azy ireo, satria raha tena tsy manao na inona na inona izy ireo dia tandindomin-doza ny fahasalamany.
Salama tsara. Omaly no navelan'izy ireo ahy tao anaty baoritra teo anoloan'ny tranoko, tsy maintsy ho iray volana ilay izy, nihinana ho azy sy nisotro ronono, mamy, fa manana alika 6 aho ary tsy mila azy? io? Amin'izao fotoana izao dia ao anaty conveyor misy vovobony, ho tsara kokoa ve ny fasika? Tena matahotra aho ny hanome azy izay tsy mikarakara azy. Tsy fantatro izay hatao amin'izany
Raha mahavita ny asany tsara ny sotrika, dia aza ovaina. Indraindray isika mieritreritra fa ny zavatra iray dia tsara kokoa fa amin'ny fotoana tena marina dia tsy manaiky ny saka.
Mikasika ny alika, ao Ity lahatsoratra ity manana fampahalalana momba ny fomba ahaizany mandefitra saka ianao.
Salama, manana saka iray aho izay tokony ho eo anelanelan'ny 6/7 herinandro, mikiaka izy nefa tsy mikorontana, efa telo andro no nanaterako azy
Manoro hevitra ny hampirisika ny faritra maha-lahy na vavy amin'ny gazoala (na taratasy fidiovana) mando amin'ny rano mafana 15 minitra aorian'ny fisakafoanana aho. Hanampy azy ireo hanina ity.
Salama, nahita zanak'ondry aho andro vitsivitsy. Tsy fantatro hoe nanao ahoana ny kotrok'izy ireo. Be rano ry zareo, mahazatra ve izany?
Tokony ho karazana pasty sy mavo izy io.
Raha misy loko hafa na hafa, dia mety hoe manana katsentsitra izy na omena ronono tsy mahazo aina. eto manana fampahalalana bebe kokoa ianao.
andry maitso dia hoy izy:
Salama. Nomena zanak'ondry aho sahabo ho 3 herinandro. Nomeko ronono izy, rehefa afaka roa andro dia manandrana hena aho ary mihinana azy, hoy aho. Saingy 6 andro no niarahako taminy ary tsy miompy izy fa mamindra. Novakiako tao amin'ny lahatsoratranao fa amin'ny fotoana hihinananao ny fifindran'ny tsinay dia "manomboka". Fa mandra-pahoviana no vao manomboka mihinana sakafo matanjaka? Misaotra
Mamaly an'i pilar verd
Amin'io taona io dia mbola mila fanampiana kely izy ireo 🙂
Aorian'ny fisakafoanana dia tsy maintsy mandrisika ny faritra an-tsiranoka amin'ny fofona mafana ianao.
Roa volana (na dia somary aloha aza) dia handeha irery any amin'ny trano fidiovana izy nefa tsy misy olana.
Salama. Omaly isika dia nitondra kitapo 6 tokony ho 1 volana. Handroaka azy ireo izy ireo. Tsy maintsy nampisaraka azy ireo tamin'ny reniny izahay mba hamonjy azy ireo. Tsy haiko na mikorontana na mikotrika irery izy ireo. Nisotro ronono tsy misy lactose izy ireo ary nanandrana sakafo mando. Tokony hiondrika irery ve izy ireo?
Raha ny tokony ho izy dia tokony hanamaivana ny tenany izy ireo, saingy mety mila fanampiana kely izy ireo amin'ny fotoana vitsivitsy voalohany.
Raha hitanao fa toa manadino ny mitsika sy / na mivoaka ny otrikaretina izy ireo, dia ilaina ny manentana ny faritra misy ny taovam-pananahana miaraka amin'ny gazy mando amin'ny rano mafana.
Geily Gomez dia hoy izy:
Hivadika 1 volana ny saka ahy amin'ny 2 Oktobra, zara raha nanana 3 andro niaraka taminy aho ary mbola tsy nahita azy na kotroka sy urinako, inona no tokony hataoko?
Valiny tamin'i Geily Gómez
Mety mila fanampiana ianao hanamaivanana ny tenanao. Mila maka gauze steril na lamba madio ianao, alemana anaty rano mafana (fa aza may), avy eo kosehinao amin'ny faritra misy ny taovam-pananahana ao aminy, anisan'izany ny vozongo. Ny tapany voalohany, ary avy eo amin'ny lamba hafa na ny lamba famafazana.
Tsy maintsy atao izany rehefa vita ny sakafo. Na izany na tsy izany, raha mbola manana olana izy dia tokony hitondra azy haingana any amin'ny mpitsabo.
Ahoana ny fomba hisorohana ny saka tsy hiala ao an-trano